Tine kombiyuta raitungamirirwa epurasitiki injectors pamusoro 20 vachikwanisa pamusoro 100-10000 giremu. Tine 6 madhipatimendi akamisa, kugadzirwa dhipatimendi, R & D (nokuti zvinhu zvitsva & CAD / Cam muforoma), imupota & ekisipoti, zvipfuwo zvokutengeserana, QC, yokuchengetera zvinhu & chokufambisa. Tine inokwana mukugadzira uye yokuchengetera zvinhu & zvifambiso zvakanaka. Wegore tichikwanisa Tote Kugadzirwa anorova 8 mamiriyoni uye avhareji yegore negore vachikwanisa kwakafanana yakakwirira sezvo matani 20000.
Mashoko yedu "vanhu, Innovation uye Quality". Tinotarisira nomwoyo wose kuti taigona kutanga refu-refu uye ushamwari mabhizimisi ukama vatengi munyika yose nokuda chamunofarira mose.